I-DA ithathela uMalema izinyathelo enkantolo ngenkulumo yakhe “enodlame” | isiZulu
I-DA ithathela uMalema izinyathelo enkantolo ngenkulumo yakhe “enodlame”
I-DA iyisitha sabantu njengoba ingakweseki ukubuyiswa komhlaba - Malema
I-DA ithi uRamaphosa ubhedile ngokukhetha uMabuza
Cape Town – Iqembu leDemocratic Alliance ngoLwesine liveze ukuthi lizovulela umholi we-Economic Freedom Fighters uJulius Malema icala enkantolo i-Equality Court.
Leli qembu lisola uMalema ngokugqugquzela udlame ngenkulumo yakhe ecwasayo.
Lokhu kulandela inkulumo eyakhulunywa wuMalema esabisa ngokupheka iMeya yaseNelson Mandela Bay u-Athol Trollip ngebhodwe elincane njengoba iqembu lakhe i-DA lingahambisani nokubuyiswa komhlaba ngaphandle kwesinxephezelo.
I-DA icaphune inkulumo kaMalema lapho ethi: “Sizoyisusa iMeya yasePE siyiqonde ngqo le ndoda yenu yomlungu yasePE sizoyinqamula uqhoqhoqho.”
OLUNYE UDABA:I-DA iyisitha sabantu njengoba ingakweseki ukubuyiswa komhlaba - Malema
Leli qembu lithi le nkulumo kaMalema igqugquzela inzondo kanye nodlame ngokusho kweSigaba 10 soMthetho wokuKhuthaza ukuLingana kanye nokuGwema ukuCwasana,”kusho uSomlomo we-DA uRefiloe Nt’sekhe.
Kwinkulumo yake, uMalema wathi ngeke bayeseke i-DA kumasipala iNelson Mandela Bay ngoba ayizange yeseke ivoti labo lokubuyiswa komhlaba ngaphandle kwesinxephezelo.
"Kumele sibafundise isifundo, sibaphuce amandla ukuze sibabonise ukuthi sizimisele ngodaba lokubuyiswa komhlaba,"kusho uMalema ngoLwesithathu engaphandle kwesibhedlela iBaragwanath lapho beqhuba khona umkhankaso wabo wezempilo.
UMalema usola iDA ngokungazwelani nobuhlungu abantu abadlula kubo bephucwa umhlaba ngo-dli, ngokuthi leli qembu lithi labo abaphucwa umhlaba wabo ezindaweni ezifana neDistric Six kumele banikezwe izindlu.
Owesifazane wase-Eastern Cape kanye nabantu ababili ayesebenzisana nabo bagwethswe udilikajele ngemuva kokulahlwa yicala lokubulala umyeni wakhe.
ISITHOMBE: Amaphoyisa acela ukufuniswa indoda esolwa ngokudlwengula izingane eThekwini
Amaphoyisa aseBrighton Beach ngaphansi kophiko lweFamily Violence, Child Protection and Sexual Offences acela ukufuniswa uSibongiseni Richard Ngcobo, 40, osolwa ngokudlwengula izingane ezine.
Igwetshiwe indoda yaseThekwini eyabulala owayeyingoduso
INkantolo yesiFunda yaseNtuzuma igwebe owesilisa iminyaka engu-33 ebhadla ejele ngezinsolo zokubulala owayeyingonduso yakhe ngo-2013, kusho amaphoyisa aKwaZulu-Natal.